SSA -sergical sperme retrival – Zaza no iriako
SSA -sergical sperme retrival
Voalohany dia ialako tsiny indrindra fa toa nanao tsidi-pahatra ity blog ity izaho tato hoato,tsy haiko fa misy fotoana aho tsy te-hiresaka tsotr’izay ny diako,tsy manana‘courage‘ mihitsy zaho indraindray, toa lasa malahelo foana izaho isaky ny hanoratra. Androany zaho dia tapa-kevita fa hanoratra indray.
Araka ny nolazaiko tamin’ny lahatsoratra farany dia hiresaka momban’ilay SSA-TESA (Surgical sperme retrival) izay natao tamin’ny vadiko aho . SSA moa no vahaolana farany izay narosony Dr Cici anay raha ohatra ka maniry ny hanana zaza iombonana izahay mivady.
Ny alina mialohan’ilay SSA izaho dia tsy nahita tory,fa mivadimbadika eo am-pandrina, tonga tao an-tsaina daholo izao rehetra izao. Inona hatao raha ohatra ka tsy mahomby io piaka io? tsy mandry mihitsy ny saiko. Lava tamiko io alina io,ndraindray toa manofy ratsy mihitsiny aza aho…nakiniko amin’ Andriamanitra mandrakariva ny fiainanay,tsy mitsahatra aho,ny misaotra,ny mifona,ny mangataka Aminy.
Tonga ihany ny marainan’ny 9 Decembra 2014 tamin’ny10 ora maraina fotoana nomen’ny dokotera hihaonana aminy, ary ao amin’ ilay Fertility Associate (F.A) ihany no hanaovana ny rehetra. Araka mahazatra anay dia tonga aloha foana izahay,mba hialana amin’ny rotoroto sy amin’ny fahatarana.
Nony tonga tamin’ny 10 ora marina dia dokotera hafa nampandroso anay,ary nilaza izy fa Dr Cici dia tsy miasa ny maraina io,ka izy no Dr Megane handray an-tanana ny rehetra amin’io tapak’andro maraina io. Nazavaina taminay amin’ny an-tsakany sy an-davany ny zavatra rehetra hataony mandritra io SSA io.Avy eo dia nomeny fotoana izahay hamaky ilay taratasy fanekena, ary nampanaoviny sonia.
SSA na sergical sperme retrival moa dia efa nazavaiko tao amin’ny lahatsoratra teo aloha ary ny anaesthetic cream no ampiasaina amin’ny toerana voafaritra.
Rehefa vita zay dia nampiandrasiny teo amin’ny trano fiandrasana izahay, ary nilaza i Dr Megane fa hisy mpitsambo mpanampy ho tonga eo refa afaka 10 mn any hoany.
Nony afaka 10 minitra dia nampandroso ny vadiko ilay mpitsambo mpanampy ,izaho kosa nijanona irery teo no sady feno tebiteby. Izaho irery no teo amin’ny trano fiandrasana,mbetika misotro rano, mbetika mamaky boky, toa voa maika mavesatra tamiko ny finjanonako irery teo,tsy nisy olona mba hizarana izay ao am-po. Lava be tamiko ny 40 mn izay nolazany dokotera fa mety ho faharetany. Isaky misy varavarana maneno na misy olona migonongonona dia tranga foana sofiko………
…zay fa nisy varavarana nivoha, hay ilay mpitsambo mpanampy,“Afaka mandroso enao, vita soa aman-tsara izy tao”
Toy ny tadio nitsanganako sy nidirako amin’ilay varavara,nampandrosony tao aminy efitrano misy ny vadiko aho,he izany hafaliko nahita azy.. Navelan’ilay mpintsambo mpanampy niresaka kely teo izahay aloha, nony afaka kelikely izy dia nanome taratasy iray izahay,ary nazavany bebekoa izay voalaza tao. Ilay taratasy ny tena marina dia fanekena ny hatao momba an’ilay valin’ny ilay SSA ( ohatra : firy taona no hitahirizana azy raha misy ao? Iza ny anaran olona afaka mampiasa azy? sns….maro be tao anatin’ilay fifanekana fa tsy tadidiko daholo.
Nomeny fotoana tsara izahy hamakiana sy handinihana ilay taratasy satria tena zava-dehibe ,ary fanam-pahakevitra matotra ilay fifanekena,ary iakinany ny hoavinay rehetra. Mazava hoazy fa refa vita dia samy nanao sonia izahay mivady.
Noroson’ilay mpitsambo mpanampy dite sy mofo mamy izahay , ary nazavainy aminay ny tokony hatao raha sanatria ka santria ka misy fanaitainana ny vadiko taorian’ilay SSA. Ary farany dia nanamafy izy fa anio tolakandro ihany dia ho fantatra ny valiny, ka hiantso anay i Dr Cici hilaza valiny.
Teo amin’ny 11h 45 vita rehetra,ary afaka nody soa ama-tsara izahay, tsy andrinay mihitsiny ny hiantsoan’i Dr Cici handrenesanay valiny. Vita hozy izaho dingana iray, miandry valiny sisa.
Ataoko ao lahatsoratra maraka ao ny valiny lay SSA,mamerina fialatsiny hatrany aho amin’ny tsidi-pahatra izay nataoko,mampanantena aho fa tsy hiandry ela amin’ny famoahana lahatsoratra maraka.
Misaotra anao hatrany aho namaky.
Tagged familly, fiv, fiv malagasy, ivf, malagasy, taranaka, zaza
Dingana iray vaovao : Public funding …
zay vo tafa verina indray …..